Zava-bavaka 20 amin'ny ady ho an'ny fiangonana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka 20 Vavaka ho an'ny fiangonana ny ady amin'ny ady
20 Vavaka ho an'ny fiangonana ny ady amin'ny ady
Matthew 16: 18: 18 Ary Izaho milaza aminao koa: Hianao no Piera, ary ambonin'ity vatolampy ity dia haoriko ny fiangonako; ary ny vavahadin'ny helo tsy haharesy azy.
Ny Fiangonan'i Jesoa Kristy no vatan'ny mpino vao teraka, ary izy io no andin'ny fahamarinana. Ny fitomboan'ny fiangonana mandeha ho azy dia mitarika amin'ny fampihemorana ny maro be helo. Efa hatrany am-piandohan'ny nahaterahan'ny Fiangonana, ny vavahadin'ny afobe dia niady foana hanohitra ny fiangonana. Fantatry ny devoly fa ny fiangonana ihany no mety hahasorena ny drafitra maha-olombelona azy, fantany fa ny fiangonana irery ihany no afaka mamonjy an'izao tontolo izao. Fantany koa fa ny vahaolana amin'ny krizy rehetra eto amin'izao tontolo izao ankehitriny dia ao amin'ny fiangonana. Tsy hijanona na amin'inona na amin'inona ny devoly hanandrana hampidina ny fiangonana, fa ny vaovao tsara dia tsy afaka. Androany isika dia handray anjara amin'ny vavaka vavaka 20 ho an'ny fiangonana. Mahery vaika ny fiangonan'i Kristy, ary tsy afaka mifanohitra amin'izany ny vavahadin'ny afobe.
Ny fiangonana tsirairay izay te-hanjaka hatrany ny herin'ny helo dia tsy maintsy manome vavaka amin-kafanam-po, ao am-piangonana voalohany, ny vavaka dia iray amin'ireo zavatra roa nifantohan'ny Apôstôly, Asa 6: 4. Fiangonana mivavaka dia fiangonana velona sy mandresy ary rehefa mijanona mivavaka ny fiangonana dia manomboka ho faty ny fiangonana. Amin'izao vanim-potoana farany izao, ny fiangonana izay mivavaka ihany no hanohy handresy ny devoly. Ny devoly dia manala baraka ny fiangonana, isan'andro dia maheno ireo karazana fanalam-baraka sy fanendrikendrehana manohitra ny fiangonana sy ny pasitera io, io no paikadin'ny devoly manaratsy ny fiangonana ary mahatonga ny olona maro hisoratra anarana tsy mino an'Andriamanitra. Andriamanitra, miady isika, tsy maintsy mitsangana ary mandray karama ady ara-panahy, tsy maintsy miditra ao isika Torohevitra mivavaka amin'ny ady ho an'ny fiangonana. Mila hamafin'ny vavaka ny fiangonana amin'izao fotoana farany izao. Tsy maintsy mivavaka ho an'ireo pasitera isika, satria Andriamanitra dia manohy mampitombo ny afony amin'ny fiainany, tsy maintsy mivavaka ho an'ny ankohonany koa izy ireo, ho fiarovana sy fitarihana, dia tsy maintsy mangataka amin'Andriamanitra isika mba hiaro azy amin'ny fakam-panahy sy ny fanalam-panahy.
Tsy maintsy mivavaka isika fa ny tenin'Andriamanitra dia manana lalana malalaka amin'ny firenena rehetra, ny tenin'i Kristy hanjaka amin'ny ota sy ny fampianaran'i satana any amin'ny firenena sy ny tanàna rehetra, dia tsy maintsy mivavaka isika raha misy fifohazana sy fanavaozana ny Filazantsaran'i Kristy any amin'ny firenena rehetra. dia tsy maintsy mivavaka mba hanohizan'ny fiangonana mitombo hatrany amin'ny fanambinana, mba hahafahany mamindra ny Filazantsara hatrany amin'ny faran'ny tany. Tokony hivavaka isika mba hanesoran'Andriamanitra ny fon'ny olona mony ary omeny fo mahay mandray ny fihainoana ny filazantsara izy ireo ary handray am-panetren-tena. Tsy maintsy mivavaka hatrany isika matetika mba hitohy hatrany ny fivoriantsika isaky ny fivoriambe isan-andro.
Ny lisitry izany rehetra izany Torohevitra mivavaka amin'ny ady satria tsy mety ho reraka ny fiangonana, raha tsy maintsy manjaka amin'ny devoly isika dia tokony hivavaka. Hitako Andriamanitra mitondra ny fiangonana ho toerana manjaka amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Ny ozona rehetra momba ny fahafatesana tsy maharitra miasa eo amin'ny fiainan'ny minisitr'Andriamanitra, indrindra eto amin'ity firenena ity; aringana, amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Ray ô, ny fandaharam-potoananao ho an'ny fiangonana amin'izao fotoana farany izao dia tsy hoesorina, ny fiangonana dia tokony hanatanteraka ny fiantsoany, amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Ny ozona rehetra ataon'ny devoly miady amin'ny fandrosoan'ny fiangonana ,, manorotoro sy mandringana anao amin'ny afo aho amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Ny hery rehetra ao amin'ny fasana, miezaka ny handevina ny fiangonan'i Kristy amin'ity firenena ity, hiparitaka amin'ny afo amin'ny anarana jesosy.
5. Ray, hanala am-pahibemaso ny fahavalon'ny fiangonana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy
6. Andriamanitra mitsangàna ary aparitaka izay rehetra maneso ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy
7. Ray ô, ajanony ny vavan'ireo manandoka sandoka sandoka rehetra manoloana ny fiangonana
8. Ray ô, avelao ho ivon'ny vahaolana eto amin'ity firenena ity ny fiangonana
9. Ray ô, omeo feo ny fiangonana izay tsy azo ampanginina mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy
10. Ray ô, avelao ny fifohazana sy fanavaozana ny filazantsara rehefa mitaona olona an-tapitrisany ho any amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy ianao
11. Ray Dethrone sy e! Manahaka ny fahavalon'ny fiangonana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Andriamanitra ô amin'izao andro farany izao, atsangano ireo minisitra amin'ny fotoana farany izay hitondra ity tontolo ity amin'ny tafio-drivotra ho an'ny anaran'i Jesosy
13. Ray ô, avelao hirehitra lalandava ao am-pon'ireo minisitra ao amin'ny anaran'i Jesosy ny afo
14. Ray ô, ampitomboo ara-bola ny fiangonanao ary ampanjakao amin'ny anaran'i Jesosy izahay
15. Ray nangina ny vavan'ny mpanao gazety ratsy fanahy niteny ratsy ny fiangonana tamin'ny anaran'i Jesosy
16. Ray ô, ho tonga rindrina afo, manodidina sy manodidina ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy
17. Dada ô, manohy ny fandefasanao ny tenyo vaovao avy amin'ny fiangonantsika rehetra maneran-tany, ka mitondra olona maro tsy voavonjy amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Najanon'i Dada izay rehetra manandrana manakana ny fiangonana
19. Ary manapa-kevitra aho fa sambatra izay rehetra mitahy ny fiangonana dia ozona izay rehetra manozona ny fiangonana
20. Ray ô, misaotra anao aho noho ny fanalam-baraka ny fahavalon'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy
Previous lahatsoratra30 Ireo laharam-bavaka mahomby
Next lahatsoratra20 Ireo teboka amin'ny vavaka amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly
Amos silungwe 27 Novambra 2019 Amin'ny 9:20 hariva
Ny pasitera mpitandrina laharana faha-20 sy isa 4 azafady manitsy azy ireo, misaotra anao nizara anay
Ny Pasitera Ikechukwu Chinedum 28 Novambra 2019 Amin'ny 3:59 maraina
Hotahin'Andriamanitra ianao tompoko, ho fanitsiana
Martha sartie kamara 26 Desambra 2020 Amin'ny 1:33 alina
Tiako daholo ireo teboka vavaka
Enga anie ny Tompo hanohy hampitombo anao amin'ny fahasoavana.
Brobbey 9 Jolay 2021 Amin'ny 9:40 hariva
Misaotra betsaka noho ireo teboka vavaka rehetra nataonao. hotahian'andriamanitra anie ianao
Vavaka amin-kery manohitra ny fitondran-tena
28 Ny vavaka dia manondro famelan-keloka